Dagaal culus oo ka socda duleedka Boosaaso xilli Al-Shabaab ay maxaabiis badan furteen | Gaaroodi News
Madaxweynaha Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso
Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay xabsiga Dhexe ee Boosaaso ka sii daayeen ilaa 400 oo maxbuus oo ka xirnaa. Xabsigan waxaa ku jiray xubno ka tirsanaa Al-Shabaab iyo daacish oo horay loogu riday xukunno kala duwan.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Puntland ayaa BBC-da u xaqiijiyay in uu wali dagaal ka socdo dhulka buuraleyda ah, isagoo intaasna ku daray in ay 14 maxbuus ka qabteen Al-Shabaab. Ciidamada Puntland ayaa howlgallo ka fuliyay xaafadaha Boosaaso
Deni ayaa kulamo la yeeshay saraakiisha amniga ee gobolka Bari
Xog badan lagama hayo inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay iyo dagaalka hadda socda ee u daxeeya labada dhinac.
Qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabiyay in askar ka tirsan ciidanka Puntland lagu dilay weerarkaas oo loo adeegsaday araxyo iyo rasaas.
Faahfaahin taliyuhu kama uusan bixinin khhasaaraha ka dhashay weerarka inkastoo laga soo xigtay in uu jiro khasaare isgu jira dhimasho iyo dhaawac